कीर्तिपुरका ९ जनामा आरडिटि पोजेटिभ, नगरपालिका पिसिआर रिपोर्टको पर्खाइमा – Mayorkhabar.com
८ जेठ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी अग्रभागमा खटिँदै आएका कीर्तिपुरका स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको कोरोना परिक्षण गरिएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले हालसम्म ३५६ जनाको परीक्षण गरिसकेको छ । जसमा २०५ को आरडिटि र १५१ को पिसिआर विधि मार्फत परीक्षण गरिएको नगरपालिकाकी उपमेयर एवंं प्रवक्ता सरस्वती खड्काले मेयर खबरलाई जानकारी दिनुभयो ।
तीन चरणमा भएको परीक्षणमा नगरपालिकाले जेठ ५ गते नगरको सरसफाईमा खटिने ६९ जना सफाईकर्मीको आरडिटि र २८ जनाको पिसिआर र २८ जनाको दुबै विधि मार्फत परीक्षण गरेको थियो । परिक्षणमा ४ जनाको आरडिटि पोजेटिभ देखिएको थियो ।
आरडिटि परीक्षणकोलागी रगतको नमूना लिँदै
त्यस्तै जेठ ६ गते कीर्तिपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी ९५ जनको परिक्षण गरिएको थियो । जसमा पनि ५ जनमा आरडिटि पोजेटिभ देखिएको थियो । त्यसै गरि ७ गते बुधवार गरिएको परीक्षणमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकार्मी र कर्मचारी गरी १७४ जनामा आरडिटि र पिसिआर विधि मार्फत परीक्षण भएको उपमेयर खड्काले बताउनुभयो ।
पिसिआर परीक्षणकालागी स्वाब संकलन गरिँदै
आरडिटि पोजेटिभ देखिएका ९ जनाको पिसिआर रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ भने उनीहरुलाई अहिले स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा राखीएको छ ।
साथै ती ९ जना सहित १५१ जनाको पिसिआर रिपोर्ट चाँडै आउने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
Previous Previous post: मेयर हुनु त यस्तो पो ! सरकार कहाँ छ ? अमरगढीवासी भन्छन्- घरघरमा
Next Next post: उपत्यका ‘लक’
बैंकिङ कारोवारका लागि सैनामैनाले तोक्यो समयसिमा ८ जेष्ठ २०७७ १४:२१
नगरपालिका संघ गण्डकी प्रदेशद्वारा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण ८ जेष्ठ २०७७ १४:२१
क्वारेन्टिन कुर्दाकुर्दै वडा अध्यक्षले गुमाए ज्यान ८ जेष्ठ २०७७ १४:२१
काठमाडौंलाई स्वस्थ राख्नेहरुको स्वास्थ्यप्रति कोकाकोला–क्रिएसनको चिन्ता ८ जेष्ठ २०७७ १४:२१
भेरीका मेयर कुट्पिट गर्ने शाही पार्टीबाट निस्कासित, मेयर भन्छन्– युवा बिग्रिए देश बिग्रन्छ, सहीमार्गमा ल्याउने जिम्मा हाम्रै हो ८ जेष्ठ २०७७ १४:२१